Nambaran’izy ireo fa efa naharay fitoriana mahakasika iny raharaha iny ny teo anivon’ny polisim-pirenena. Efa nosokafan’izy ireo ihany koa ny fanadihadiana ka nahafantarany fa tsy polisy miasa ao amin’ny kaomisarian’ny 67 Ha (CSP 7ème Arrondissement) izy io fa eny Anosy. Araka ny fanadihadiana ihany dia izy sy ny zanany lahy no voakasika amin’ilay raharaha .
Nomarihin’izy ireo fa vesatra roa no mihatra amin’izay nandika lalàna tahaka izao, dia ara-pitsipi-pifehezana sy ny araka ady heloka (Pénal). Nanamarika ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka fa vonona ny haneho ny mangarahara tanteraka ny amin’ny mety ho tohin’ny raharaha mikasika ity tranga ity.